Akụkọ - Uru nke nkedo anwụ.
Uru nke nkedo anwụ anwụ.
Nkedo anwụ bụ usoro na-arụ ọrụ nke ọma, nke akụ na ụba na-enye ụdịdị na akụrụngwa sara mbara karịa usoro nrụpụta ọ bụla ọzọ. Akụkụ nwere ogologo ndụ ọrụ yana enwere ike ịmebe ya iji mejupụta mmasị anya nke akụkụ gbara ya gburugburu. Ndị na-emepụta ihe nwere ike nweta ọtụtụ uru na uru site na ịkọwa akụkụ nke nkedo anwụ.
Mmepụta ngwa ngwa dị elu - Nkedo anwụ na-enye ụdị dị mgbagwoju anya n'ime nnabata nso karịa ọtụtụ usoro mmepụta oke ndị ọzọ. Achọghị obere igwe ma ọ bụ enweghị igwe na enwere ike imepụta puku kwuru puku ihe nkedo tupu achọọ ngwa ọrụ ọzọ.
Ihe ziri ezi na nkwụsi ike nke akụkụ - Nkedo anwụ na-emepụta akụkụ ndị na-adịgide adịgide na n'ụzọ kwụsiri ike, na-ejigide nnabata nso. Ha na-eguzogidekwa okpomọkụ.
Ike na ịdị arọ - Akụkụ nkedo anwụ dị ike karịa ịkpụzi injection plastik nwere otu akụkụ. Ihe nkedo mgbidi dị obere siri ike ma dị mfe karịa nke enwere ike iji ụzọ nkedo ndị ọzọ. Na mgbakwunye, n'ihi na ihe nkedo anwụghị enwe akụkụ dị iche iche agbadoro ma ọ bụ jikọtara ọnụ, ike bụ nke alloy kama usoro ijikọ.
Usoro mmecha ọtụtụ - Enwere ike imepụta akụkụ nkedo anwụ na-eji ire ụtọ ma ọ bụ nke edoziri, na-adịkwa mfe plated ma ọ bụ mechaa ya na opekempe nke nkwadebe elu.
Mgbakọ dị mfe - Ihe nkedo anwụ na-enye ihe ndị na-ejikọ ọnụ, dị ka ndị isi na studs. Enwere ike ịkpado oghere ma mee ka ọ bụrụ nha nha, ma ọ bụ nwee ike ịwụ eriri mpụga.
NKE NKE NKE NKWUKWU
Enwere ọtụtụ ebe maka ozi gbasara nhazi nkedo anwụ. Ndị a gụnyere akwụkwọ ederede, akwụkwọ teknụzụ, akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, nzukọ ọmụmụ na ọmụmụ nke ndị otu injinia, ndị otu azụmaahịa na ụlọ ọrụ na-eduzi. Ọtụtụ mgbe, ihe nkedo anwụ ahọpụtara ka ọ mepụta akụkụ akụrụngwa bụ ezigbo ebe maka ozi.
Iji nweta uru kachasị na usoro nkedo anwụ anwụ, ọ na-adị mma mgbe niile ka ị nweta ahụmịhe dịgasị iche iche nke ihe nkedo ọnwụ omenala. Ekwesịrị ịtụle atụmatụ ọhụrụ n'oge mmalite nke mmepe. Enwere ike nweta nnukwu ego n'oge mgbanwe nke echiche a.
Ihe omuma a na-egosi (Tebụl 5) na oke nha na oke ibu maka nkedo anwụ nke alloys dị iche iche nwere ike ịdị iche n'okpuru ọnọdụ pụrụ iche. Mgbe ị na-enwe obi abụọ, jụọ onye na-ese ihe gị. Ọ maara nke ọma na ígwè ọrụ ya na ngwá ọrụ ya ma nwee ike ịnye aro (n'oge nhazi nhazi) nke nwere ike imetụta mgbanwe ngwá ọrụ na mmepụta ihe, na-akpata ụgwọ dị ala.
Nke gara aga: Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu
Osote: Ngwa ubi nke aluminom alloy ngwaahịa.